Sezim'khalele Futhi UNdlunkulu Enkantolo - Gagasi World
Sezim’khalele Futhi UNdlunkulu Enkantolo
Usephinde wakhala ngaphansi kwentshebe yakwaMashu okwesibili futhi uNdlunkulu weSilo esesakhothama, uSibongile MaDlamini, kulandela ukuchithwa kwesicelo sakhe nabammeli bakhe sokuchibiyela amaphepha abawafake enkantolo.
Lenkantolo ephakeme yaseMgungundlovu isingenele esigabeni sesibili njengoba iqhubeka nokulalela umbango oshunqa uthuli waseNdlunkulu kaZulu, maqondana namafa kaNgangezwelakhe uZwelithini kaBhekuZulu.
Zilokhu ziyikhalele njalo iNdlunkulu uMaDlamini njengoba inkantolo isiphinde yenqaba futhi yachitha isicelo sethimba labammeli bakhe sokuchitshiyelwa kwesicelo sakhe sokuba inkantolo ichithe ubuqiniso bemishado yeSilo noNdlunkulu abagcangca iSilo uZwelithini emuva kwakhe.
U-MaDlamini ufuna inkantolo imnike ilungelo lokuthi athathe ingxenye yakho konke okushiywe yiSilo uZwelithini njengoba ethi nguyena unkosikazi wokuqala owashada ngokomshado ohlanganisa amafa.
Izolo ijaji u-Isaac Madondo uchithe isicelo sikaMaDlamini sokuba lishenxe kulelicala njengoba kuvela ukuthi lalikhona ngesikhathi iSilo sigcangcelwa ngomunye wondlunkulu baso uKaMafu.
Kumanje inkantolo isingenele esigabeni sesibili secala lapho amadodakazi akhe uMaDlamini, okunguMntwana uNtandoyenkosi kanye noNtombizosuthu, befuna incwadi yefa eyashiywa yiSilo ithathwe njengengekho emthethweni njengoba bekholelwa ngukuthi isignature yeSilo yakokotelwa kulencwadi.
Kulencwadi iSilo saqoka uNdlunkulu waso osekhotheme uMantfombi Dlamini njengokunguyena obekufanele athathe ubukhosi uma sona sesikhotheme.
Kulindeleke ukuba ijaji uMadondo likhiphe isinqumo kulamacala khona namhlanje noma ngokuhamba kwezinsuku njengoba kusazolalelwa necala lesithathu elifakwe nguMntwana uMbonisi, njengoba efuna kumiswe ukugcotshwa kweSilo uMisuzulu.
U-Khoza Ucacisa Eyokugawulwa Yizembe
NPA to Pounce on those Implicated in State Capture